Indlu enamachibi kanye ne-jacuzzi eValle - I-Airbnb
Indlu enamachibi kanye ne-jacuzzi eValle
Valle de Bravo, Estado de México, i-Mexico
Indlu enhle futhi enomlingo enezitezi ezi-3 ebheke ichibi e-San Gaspar del Lago e-Valle. Inegaraji lezimoto ezi-2 noma ezi-3, ikhishi elikhulu, indawo yokusebenzela, ingadi yophahla enetafula le-ping pong, ichibi kanye ne-jacuzzi. Igumbi elikhulu linethala, indlu yokugezela kanye ne-TV. I-WIFI. Indawo ihlanzwe ngokuphelele futhi kulandelwa imigomo yenhlanzeko ukuze bakwamukele futhi kushone kahle.
Le ndawo yakhelwe ukuthi ikwenze uzizwe usekhaya, ikhululekile kakhulu futhi ihlotshiswe ngesitayela ngezinto ezivela emhlabeni wonke.
I-Malle de Bravo iyikhaya elenziwe ngenhliziyo, eligcwele izindaba zokuphila kwami, ukuhamba kwami emhlabeni jikelele, izinto zakudala nezincwadi ezikhulise impilo yami kanye nemicabango yami. Ikhona ngalinye linemininingwane ebonisa imfudumalo yekhaya langempela.
Indlu iyatholakala izivakashi, yonke into isesandleni sabo futhi bangasebenzisa zonke izinsiza.
Inezindawo zokulala, izinto zokuhlanza, izinto zasekhishini eziwubukhazikhazi, ujeke wamanzi onawo, idamu lokubhukuda, i-jacuzzi kanye nombono omuhle wechibi.
Kubalulekile ukusho ukuthi kunezindleko ezengeziwe zegesi zokushisa i-Jacuzzi ($ 1,000 pesos izinsuku ezingu-2-3) noma phakathi nezinsuku zokuhlala. Izinga lokushisa le-pool lifudumele ehlobo kodwa libanda kancane ebusika, kodwa alinawo ubhayela.
Imizuzu engu-8 nje ukusuka endlini, kunendawo ebizwa ngokuthi i-Marina Moy, lapho nginendawo yokuba ujabulele imisebenzi yechibi namanzi. Kubalulekile ukuthi ubhukhe kusenesikhathi ukuze bakwazi ukukunikeza ngamasevisi owadingayo.
4.58 out of 5 stars from 114 reviews
4.58 · 114 okushiwo abanye
Indlu ibheke echibini, endaweni ethulile futhi indlu ingaphansi komgwaqo. Yindawo ephephe kakhulu futhi ekhanyiswe kahle.
Ngokuvamile angikho ekhaya, kodwa ngisenkonzweni yakho ukuze ngikusize ngesikhathi uhlala khona. UNksz. Alejandra, umsizi wami uhlale etholakala ukuze abemukele, abaxoshe futhi abanikeze noma yiluphi uhlobo lolwazi mayelana nezinkonzo abazidingayo.
Ngokuvamile angikho ekhaya, kodwa ngisenkonzweni yakho ukuze ngikusize ngesikhathi uhlala khona. UNksz. Alejandra, umsizi wami uhlale etholakala ukuze abemukele, abaxoshe futhi aba…